'जुनकीरी'(खण्ड-क) : अब के होला ? के स्विकार्छिन होला त हिमालको प्रेम प्रस्ताव सुस्मिताले ? | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ असार १६ गते १०:५९
बिराज घिमिरे (भुमिकास्थान-०९, अर्घाखाँची)
अचानक मेरो आँखा खुल्यो, आँखा अगाडी आमा-बुबा र दिदी हुनुहुन्थ्यो। म त्यतिबेला लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवलमा रहिछु। बुबा- आमाको आँखामा आँसु भरिएको थियो, आमाले मेरो टाउकोमा हात राख्दै 'भगवानलाई लाख लाख धन्यवाद' भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यत्तिकैमा डा.कपिल देवकोटा आउनुभयो र सबैलाई बाहिर पठाएर मलाई हेर्नुभयो त्यसपछि मलाई के के भएको छ सबै भनेर सम्झाउँदै भन्नुभो: "केही समय हलका गाह्रो हुन सक्छ, नआत्तिनु नानु, समस्या र समाधान जिवनको एउटा मार्ग हो। कहिलेकाही दु:ख पनी भोग्नुपर्छ"। त्यसपछि नर्सलाई ३-४ दिन जति यहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ, यो औषधिहरु समय समयमा खुवाउनुहोस भन्नुभयो। 'हस डा. साब' नर्सको जवाफ थियो। उतिबेलै दिदिलाई बोलाएर औसधि लिनको लागि पठाएर आफुहरु बहिर जानुभो। डाक्टर गएपछि आमा भित्र आउनुभयो र सोध्नुभो: छोरी कत्तिको गाह्रो भएको छ? "सबै शरीर दुखिरहेको छ आमा"। कुरा गर्दै थिएँ बुबा पनि पस्नुभयो।
आमा र बुबासंग यस्तै हलका कुराहरु गर्दै थिएँ। सुस्मिता कस्तो छ तिमिलाई? भन्दै उही मसंगै बसमा आउनुभएको प्रकाश दाइ फलफुल लिएर आउनुभयो। अचम्मित मान्दै उहाँलाई हेरेर भनेँ; हजुर यहाँ? संगै दिदि आएर भन्नुभयो: तिम्रो दुर्घटना भएपछी मैले प्रकाश र हिमाल लाई बोलाएकी थिएँ। यदि प्रकाशहरु हुँदैनथे भने तिमीलाई यहाँ ल्याउन निकै गाह्रो हुने थियो म एक्लैलाई।
मैले धेरै धन्यवाद दाईहरुलाई भनेँ। अलि भिड देखेपछी एकजना नर्स रिसाउँदै आएर भनिन "एकजना मात्रै बस्ने भनेको सुन्नुभएको थिएन? के को भिड हो यस्तो? यहाँ मेला लाएको छ र ? खै, औषधि ल्याउनु भयो? सबैजना बाहिर गइदिनुहोस त ।" ठूलो दुर्घटना र बेहोस भएर पनि मलाई हात र खुट्टामा मात्रै क्षति भएको थियो। देब्रे हात पोलमा ठोक्किएर भित्रको सानो हड्डि फुटेको रहेछ भने, खुट्टाको घुँडा माथिको मासु बज्रीएको रहेछ।
शरीरमा अन्य सामान्य असर परेकोले ३-४ दिन अस्पतालमै बस्न भन्नुभएको थियो, डा. देवकोटा सरले। औषधिहरु लिएपछि, सामान्य कुराहरु भैरहेको बेला मैले दिदिलाई सोधेँ: दिदी प्रवेश परीक्षा के गर्ने होला? समय सकिने पो हो कि ? दिदिले भन्नुभयो: यस्तो अवस्थामा कसरी जान्छेउ र परिक्षा दिन? मैले नजिकका तिलोत्तमा, कालीका, कान्ति र न्यु होराइजन क्याम्पस हरुमा फर्म त भरिदिएकी थिएँ तिमी आउने भनेपछि। परिक्षा पो कहिले पर्छ खै। "मलाई एउटा तयारी गर्ने पुस्तक ल्याइदिनुहोस न दिदि म सकेँभनेँ हेर्छु ।"
मेरो कुरा सुनेर आमाले भन्नुभयो: 'आफू बाँचेपछी परिक्षा पछि दिएपनी हुन्छ, पहिला तिमी ठिक हुनुपर्यो। अस्पतालको बेडमा पनि परिक्षाको पिर छ।'
मैले हुँदैन आमा सकेँ भने परिक्षा दिइहाल्छु नि भनेँ। दिदिले अर्को दिन मलाई एउटा पुस्तक ल्याइदिनु भयो, म आराम गरेरै पुस्तक हेर्दै गएँ। बेडमा कुर्नको लागि एकपटक मा १ जना भन्दा बस्न नमिल्ने भएकोले पालो गरेर कुर्नुभएको थियो।
दिनभर प्रकाश र हिमाल दाईहरु पनि आएर कुर्नुभएको हुन्थ्यो, मलाई निकै ठुलो सहयोग पुर्याउनुभयो। हिमाल दाइको पनी घर अर्घाखाँचीमै रहेछ, प्रकाश दाइसंगै गोलपार्कमा बस्नुहुँदो रहेछ। उहाँहरुले मलाई पढाइमा पनी सहयोग गर्नुभयो। यसै गर्दै अस्पतालको दिनहरु बित्यो। त्यहाँबाट निस्कने दिन बिहानै दिदि आएर भन्नुभयो "नानू तिलोत्तमा क्यामपसको प्रवेश परिक्षा आज रहेछ, गोलपार्कको लुम्बिनी बोर्डिङ स्कुलमा परिक्षा केन्द्र छ रे, यहाँबाट जान सम्भव नहुने भयो। डाक्टरले पनि कतै हिँड्न हुँदैन कोठामै आराम गर्नु भन्नुभएको छ।"
दिदिको कुरा सुनेर हिमाल दाइले भन्नुभयो: "बुटवलको लागि मात्रै नभएर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमै बारम्बार उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल क्याम्पस हो तिलोत्तमा क्याम्पस। यसमा भर्ना पाउन सक्ने भने त निकै राम्रो हुने थियो।" दाइको कुरा सुनेर आमाले भन्नुभयो: "बाबू हामीलाई निजी क्यामपस हरु भनेको त 'आकाशको फल आँखा तरि मर भनेजस्तै हो'।" "अगाडि नाम निकाल्न सक्ने हो भने त केही छुट पनि हुन्छ नि अन्टि। प्रवेश परीक्षा दिएर त केही बिग्रीदैन। जिल्ला प्रथम भएकी मान्छे, केही छुटमा नाम निस्किहाल्यो भने धेरै सहज भइहाल्छ।" दाइको उत्तर थियो।
बिहानको ११ बजे डा. देवकोटा आएर हेर्ने र निस्कने कुरा भैरहेको थियो। उता प्रवेश परिक्षा भने दिउसोको १ बजेबाट रहेछ। अन्ततः "तिलोत्तमाको प्रवेश परिक्षा नदिने बाँकि अरु क्याम्पसको परिक्षा शरीरले साथ दिएमा दिने भन्नुभयो आमाले।" डा. देवकोटा सर आएर हेरेपछी, करिब १ घण्टापछि त्यहाँबाट निस्कने अनुमती दिनुभयो। प्रयाप्त आराम र औसधिहरु लिइरहनु भनेर १५ दिनपछी एकपटक आउनु भन्नुभएको थियो।
हामी निस्कने तयारी गर्दै थियौँ मैले दिदी र आमालाई अनुरोध गर्दै भनेँ: "दिदी मलाई परिक्षा केन्द्र सम्म पुर्याइदिनुहोस है, हातले गर्न हुन्छ बसेर गर्ने हो म एकैछिनमा गरिहाल्छु नि।" तर आमाले हुँदैन, त्यो निजि क्यामपसमा नाम निस्किएपनी हाम्रो आर्थिक स्थितिले भेट्दैन त्यहाँ पढाउने, किन दिनुपर्यो भन्नुभयो। दिदी केही बोल्नु भएन।
यिनै कुराहरु चलिरहेको बेला हिमाल दाइले भन्नुभयो: "अन्टि फर्म भरिसकिएको छ, सक्छिन भने दिँदा राम्रो हो नि, हामीले सजिलै लिएर गएर परिक्षा गराएर ल्याउछौँ।"
प्रकाश दाइले पनि यस्तै कुराहरु थप्नुभयो। पहिला त आमाले मान्नुभएको थिएन तर पछि हुन्छ भन्नुभयो, त्यो कुराले मलाई एकदमै खुसी बनायो। मैले हिमाल दाइलाई: "धेरै धन्यवाद दाइ भनेँ, उहाँले मीठो मुस्कान दिनुभयो।"
१ बज्नै आँटेको थियो, परिक्षा सुरु हुन १० मिनेट समय बाँकी, हामी अस्पतालबाट निस्कियौँ। प्रकाश दाइले भन्नुभयो: "मैले र हिमालले परिक्षा गराएर ल्याउछौँ, अनिता, तिमिले अंकल अन्टिलाई कोठामा लिएर जाउ।" दाइको कुरा सुनेपछि बुबाले भन्नुभयो: "होइन अनिता नानी संगै जाउ, प्रकाश चाहिँ हामिसंग हिँड, छोरी मान्छे उसलाई दिदी संग सहज हुन्छ।" त्यसपछि हिमाल दाइले एउटा ट्याक्सी बोलाउनु भयो, अनिता दिदी र हिमाल दाइसंग म ट्याक्सीमा परिक्षा केन्द्रमा गएँ। प्रवेश पत्र आमा संगै भएको झोलामा छुटेछ, प्रकाश दाइले आमा र बुबालाई त्यहीँ बस्न भनेर त्यो लिएर आउनुभयो। र हामीसंग भेटेर फर्कनु भयो।
सबै कुराले परिक्षा केन्द्रमा पुग्दा निकै ढिला भइसकेको थियो। मलाई हिँड्न नमिल्ने बल्लतल्ल दाइ र दिदिको सहायतामा स्कुल भित्र गयौँ। त्यहाँको गार्ड अंकल भन्नुहोस भन्दै आउनुभयो, दिदिले भन्नुभो: "हामी प्रवेश परिक्षाको लागि आएको। गार्ड अंकलले: परिक्षा समय २ घण्टा मात्रै हो, सुरु भएकै १ घण्टा हुन आँट्यो, अब त भित्र जान मिल्दैन बहिनी" भन्नुभयो।
मैले उहाँलाई अनुरोधमा भनेँ "अंकल मैले मात्रै हो परिक्षा दिने, यहि परिक्षाकै लागि म अस्पतालबाट सिधै यहाँ आएकी छु, यहाँबाट फर्कने नभन्नुहोस न।" मेरो अवस्था र कुरा सुनेर उहाँले ठिक छ म एकपटक सर संग कुरा गर्छु भनेर भित्र जानुभयो। उतिबेलै दुईजना सर र गार्ड अंकल आउनुभयो र सरले केही प्रश्नहरु गर्नुभयो। सरले सोधेका सबै कुराहरु म सहज रुपमा जवाफ फर्काएँ। त्यसपछि क्यामपसको बारेमा केही जानकारी दिनुभयो साथमा आफ्नो परिचय पनी। सरको नाम: कृष्ण पराजुली रहेछ, तिलोत्तमा मै फिजिक्स बिषय अध्यापन गर्नुहुँदो रहेछ। र अर्को सर भने कृष्ण सरकै पुरानो विद्यार्थी (रमेश पन्थी), भैरहवाको पक्लिहवामा रहेको कृषि क्याम्पस (IAAS) मा कृषि बिषयमै अध्यन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। एकैछिनको कुराकानी पश्चात् कृष्ण सरले नजिकैको खाली कक्षा देखाउँदै, त्यो कक्षामा बसेर परिक्षा देउ भन्नुभयो। हिमाल दाइ र दिदीले मलाई कक्षाकोठामा पुर्याउनु भयो र बाहिर आउनु भयो। रमेश सरले कपि र पेपर लिएर आउनुभयो र यसरी उत्तर लेख्ने भनेर सिकाउनु भयो। छिटो छिटो गर, केही नबुझे भन मलाई
म लेख्न सुरु गरेँ, प्रश्नहरु केहि नयाँ जस्तो र पहिला नपढेको जस्तो पनि लाग्यो। अस्पतालमा पढेको किताबले केही सहयोग भने पुर्याएको थियो।
केही नबुझेका प्रश्नहरु मैले रमेश सरलाई सोधेँ, सहजै बुझाउनु भयो। र अन्तत: १ घण्टाको समयमा मैले सबै प्रश्नहरुको उत्तर लेख्न सफल भएँ। कपिहरु बुझाउँदा रमेश सरले प्रश्न गर्नुभयो: सुस्मिता, तिम्रो घर अर्घाखाँची पो हो? हजुर सर।
कुन ठाउँ? अर्घाखाँची ढिकुरा हो सर।
मेरो पनि अर्घाखाँचीमै हो घर, डिभर्ना गा.वि.स.। मैले मुस्कान फराएर सोधेँ: अनि सर, नतिजा कहिले आउँछ?
"भोलि साँझ सम्म आउँछ।"
"कसरी हेर्ने त नतिजा?"
"क्याम्पसमा टाँसिदिएको हुन्छ, तिमिलाई गाह्रो होला म नतिजा बुझेर तिम्रो फर्ममा लेखेको नम्बरमा फोन गरौँला, यस्तोमा क्याम्पस आउन पनि गार्हो होला।"
दिदिलाई पठाउँला नि मैले हुन्न? भन्दै प्रश्न गरेँ।
त्यसपछी दिदी र हिमाल दाइ आउनुभयो, हामी सरहरुलाई धन्यवाद दिँदै त्यहाँबाट निस्कियौँ। अधिकांश त्यहाँका साथिहरु जो परिक्षाको लागि आएका थिए, उनिहरुको नजर म प्रती थियो। ट्याक्सी आयो हामी हिड्यौँ त्यहाँबाट।
जोइकुटी चोक बाट भित्र लागेपछी: हामी त्यही दुर्घटनाको बाटो हुँदै कोठातर्फ गयौँ। मलाई त्यही घटनाको याद आइरहेको थियो। केही अगाडी पुगेपछी दिदिले ट्याक्सीलाई रोकाउनु भयो र हामी त्यहिँ झर्यौँ। दोश्रो तालामा रहेछ कोठा, दिदिले मलाई छोप्नुभयो, बिस्तारै हामी माथी गयौँ। कोठामा; आमा र बुबा आराम गरिरहनु भएको थियो, अत्याधिक गर्मीले गर्दा हामी केहिबेर पंखा मुनि बसिरहेका थियौँ। दिदिले आमालाई सोध्नुभयो: प्रकाश खै त अन्टि? बाबू त हामीलाई यहाँसम्म छाडेर खै के काम छ भन्दै गए भन्नुभयो। हिमाल दाइले: अब म पनि जान्छु, केही काम परे भन्नू भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
दिदिले: खाजा खाएर जानू नि भन्नुभयो। बुबा आमा, म सबैले हिमाल दाइलाई धन्यवाद भन्यौँ। त्यसपछि बुबाले एकैछीन केही कुराहरु गर्नुभयो दाइसंग।
यत्तिकैमा दिदिको फोनमा एउटा सुचना आयो। हेर्दै भन्नुभयो: तिम्रो पर्सि कालीका र कान्ति दुबै क्याम्पसमा प्रवेश परिक्षा रहेछ तयारी गर्दै गर है।
"हुन्छ दिदी"भनेँ। अनि हिमाल दाइले ल राम्रो तयारी गर नानी भन्दै निस्कनु भयो।
त्यो दिन आमा, बुबा, दिदी र म धेरै कुराकानी गर्दै बस्यौँ। अर्को दिन दिउँसो प्रकाश दाइले दिदिलाई फोन गरेर मेरो हालखबर सोध्नुभयो। सबै ठिक छ भन्दै दिदिले फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो उहि पुरानो नोकियाको सेटमा फोनको घण्टि बज्यो। आमाले फोन उठाइदिनु भयो, उताबाट खै कसले यो नम्बर सुस्मिताको होइन, भन्दै थियो। 'हजुर' हो भन्नुभयो। एकपटक दिन सक्नुहुन्छ भनेर उताबाट भनेपछी, आमाले मलाई फोन दिनुभयो। मैले इसारामै कसको फोन हो? भनेर सोधेँ, खै भन्नुभयो। फोन छोपेर: 'हजुर' भनेँ। कोहि केटा मान्छेको आवाज, 'मैले चिनिन नि' भनेँ। म रमेश, हिजो तिम्रो परिक्षा लिएको थिएँ नि। ए, हजुर सर नमस्कार... नयाँ नम्बर पत्तै पाइन भनेँ। सरले मेरो स्वास्थ स्थिती बुझ्नुभयो, अनि मैले सोधेँ: "अनि नतिजा कतिबेला आउँछ सर? नतिजा त प्रकाशित भैसकेको छ, तिमिले दिदिलाई पठाइनौ त बुझ्नको लागि भन्नुभयो।"
अब एकैछिनमा जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेँ।
सरले भन्नुभो: "तिमि तिलोत्तमा क्याम्पसको इतिहासमै पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याएर प्रथम स्थानमा नाम निकाल्न सफल भएकि छौ सुस्मिता धेरै बधाई छ।"
यो खबरले मेरो दुखिरहेको शरीरमा सम्म एउटा उर्जा दियो, म निकै खुसी भएँ। फोन राखेर सबैलाई भनेँ, आमा बुबा, दिदि धेरै खुसी हुनुभयो।
दिदिले कृष्ण सरको फोन नम्बर राख्नुभएको रहेछ। एकैछिनमा कृष्ण सरलाई फोन गरेँ, बधाई दिँदै भन्नुभयो: "ल भर्ना हुन आइहाल है, तिमिले पुर्ण निशुल्क पढ्न पाउँछौ।"
अनि "म पनि आउनै पर्छ र सर?"
"सकेसम्म आउ न, हलका मिलाएर। सर हरुले पनि चिन्नुहुन्छ।"
"हुन्छ सर, म भोलि आउँछु" भनेँ।
अन्य क्याम्पस हरुले पनि जिल्लाको स्कुलबाट नम्बर पत्ता लगाएर फोन गरिरहेका थिए तर तिलोत्तमा बाट भने पहिला कुनै फोन आएन।
खुसियालीमै त्यो दिन बित्यो।
हामी बसेको ठाउँबाट क्याम्पसमा जान मात्रै ५ मिनेट लाग्थ्यो। दिदिले हिँड्न गाह्रो होला भनेर ट्याक्सी बोलाउनु भएको रहेछ, हामी उतिबेलै क्याम्पसमा पुग्यौँ। गाडिबाट झरेर बिस्तारै हामी अफिस तर्फ गयौँ। केही नयाँ विद्यार्थी, अभिभावक र सरहरु हुनुहुन्थ्यो। सबैको नजर हामी तर्फ थियो। कृष्ण सरले सबैको अघि मलाई चिनाउँदै नतिजा भन्नुभयो।
तिलोत्तमाकै क्याम्पस प्रमुख सर, सह-प्रधानाध्यापक सर सबैले बधाई दिँदै भन्नुभयो: "स्याबास, अब अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ है"। "अवश्य सर।"
यस्तै एकैछिन सरहरुसंग कुरा गरेर दिदीले भर्नाको लागि कुरा गर्नुभयो।
क्यामपसमा केही भिड भएकोले सह-प्रधानाध्यापक सरले मलाई अर्को कोठामा लगेर क्याम्पसको बारेमा सबै कुराहरु बताउनु भयो। त्यहाँको अनुशासन नीति नियम देखि सबै।
विज्ञान तर्फको को-अर्डिनेटर सर: नविन ढकाल र मलाई परिक्षा लिनुभएको रमेश सर आउनुभयो।नवी न सर आएर भन्नुभयो, "आहा नानू, बधाइ छ है तिमिलाई, यस्तो अवस्थामा पनि प्रवेश परिक्षामा प्रथम हुन सक्यौ हामी धेरै खुसी छौँ तिमी प्रती। क्याम्पसले गर्ने सहयोगमा हामी तिमिलाई हेर्ने छौँ।यो अर्घाखाँची जिल्लाको पानी मै मिठासपन छ, ३ बर्ष अघि यहि बाबू रमेशले पनि यस्तै गरि सबै परिक्षाहरुमा प्रथम स्थान हासील गरि नेपालकै दोश्रो विद्यार्थी घोशित भएको थियो।" यस्तै गरि सरले अन्य थुप्रै सल्लाह सुझाव दिएर जानुभयो। उपस्थित सबै सरहरुले मसंग ब्यक्तिगत रुपमै कुरा गर्नुभयो र शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। रमेश सर र कृष्ण सर भने त्यही कक्षामा बसिरहनु भएको थियो।
दिदिले म भर्नाको लागि लाग्ने सामान्य शुल्लको लागि बैंकमा पैसा बुझाएर आउँछु, तिमी बस्दै गर है भन्दै जानुभएको थियो। सबै सरहरु धेरै कुराकानी पश्चात् आफ्नो काममा जानुभएको थियो, उक्त कोठामा कृष्ण सर, रमेश सर र म बसेका थियौँ। कृष्ण सरले पढाइको बारेमा धेरै कुराहरुको सल्लाह दिइरहनु भएको थियो भने दायाँ मस्तिष्क शक्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि धेरै ज्ञान दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अचानक एकजना दिदी आएर उहाँलाई बोलाउनु भयो। सरले 'म एकैछिनमा आइहाँले है' भन्दै बाहिर जानुभयो।
त्यसपछि रमेश सरले मेरो ब्यक्तिगत जिवनको बारेमा पनि केही प्रश्नहरु सोध्नुभयो, म निकै अफ्ट्यारो मान्दै जवाफ दिइरहेकी थिएँ। साथै, आफू कसरी प्रथम स्थान हासिल गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो र पछि कसरी कृषी बिषयमा नाम निकाल्नु भयो सबै कुराहरु भन्नुभयो। यसरी हामीबीच करिब १ घण्टा कुरा भयो, अनि दिदी आएर भन्नुभयो: "ल काम सकियो जाउँ।"
सबै सरहरुसंग बिदा मागेर १.५ महिना पछि पढ्न आउने गरि हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ। रमेश सरपनी बाहिरसम्म छाड्न आउनुभयो। दिदिले फेरि ट्याक्सी बोलाउनु भयो, हामी कोठामा गयौँ। कोठामा पुग्दा; हिमाल दाइ त्यहीँ आउनुभएको रहेछ। मलाई फलफूल दिँदै मेरो स्वास्थस्थिती बारे बुझ्नुभयो। म मुसुक्क हाँसेर जवाफ फर्काएँ। साथमा बधाई पनि दिनुभयो। यसै गरि हामी १० दिन बुटवलमै बस्यौं। आमा भने घरको कामहरु हेर्नुपर्ने र स्कुलले गर्दा फर्कनु पर्यो। त्यसपछि एकपटक अस्पतालमा गएर डाक्टर देवकोटा सरलाई भेटेर, केही समय अर्घाखाँचीमै गएर आराम गर्ने भन्नुभयो बुबाले। बुटवलमा रहन्जेल मलाई प्रकाश र हिमाल दाईले आफ्नै घरपरिवारकै सदस्यले भन्दा ठूलो सहयोग गरिरहनु भएको थियो। त्यस्तै हिमाल दाइ भने अझै नजिक रहेर पढाइ लगायत धेरै कुरामा साथ दिइरहनु भएको थियो। बुबाले "आफ्नै छोरोले जस्तै साथ दिएका छौ, धन्यवाद बाबू, हामी यो गुण कसरी तिरौँला भनिरहनु भएको हुन्थ्यो।" उता रमेश सरले पनि दैनिक रुपमा फोन गरेर मेरो स्वास्थ स्थिती बुझिरहनु भएको थियो।
त्यो दिन हामी बिहानको खाना खाएर घर जाने तयारी गरिरहेका थियौँ, भने बिहानै एकपटक डाक्टर देवकोटाले भेटको लागि बोलाउनु पनि भएको थियो।
बिहान हिमाल दाइ आउनुभयो र बुवा, हिमाल दाइ र म अस्पताल जाने दिदिले भने खाना पकाउने कुरा भयो। हामी अस्पताल गएर करिब ३ घण्टापछि फर्कियौँ। खाना खाएपछि, बुबाले भन्नुभयो: "म अगाडी पुलिसले बोलाएको छ भेटेर आउँछु, गाडिको साहुले बिल अनुसारको पैसा दिने भनेको छ।
दिदी कोठा सरसफाइ गरिरहनु भएको थियो। हिमाल दाइले मलाई एउटा प्रेरणादायी पुस्तक दिँदै भन्नुभयो: "घरमा रहँदा यो पुस्तक अध्यन गर्नु, तिमिलाई धेरै ज्ञान मिल्नेछ।" हस, धन्यवाद दाइ भन्दै पुस्तक राखेँ। यत्तिकैमा दिदिले 'तिमिहरु बस्दै गर म भाँडा माझेर आउँछु है' भन्दै बाथरुम तर्फ जानुभयो। कोठाको ढोका बन्द थियो, हिमाल दाइले मतर्फ हेर्दै भन्नुभयो: "मलाई आज निकै नरमाइलो र डर लागीरहेको छ सुस्मिता।" "किन र दाइ?" मेरो प्रश्न थियो। भन्नुभो: "करिब एक महिनाको समय अस्पताल र यता उता संघै हिड्यौँ, तिम्रो बानी ब्यवहार र समस्त स्वभावले मलाई तिमी प्रती आकर्षित गरेको छ सुस्मिता।"
मैले सुनिरहेकी मात्र थिएँ।
फेरि त्यसैमा थप्नुभयो: "के तिमीले मलाई जिवनभर साथ दिएर अघि बढ्न सक्छौ ?" "मैले स्पष्ट कुरा बुझिन नि।हजुरको मतलब हामी प्रेम सम्बन्धमा बसौँ भन्न खोज्नुभएको?" मेरो प्रतिक्रिया थियो। भन्नुभयो: "हो सुस्मिता, तिम्रो हरेक स्वभाव र क्रियाकलाप मलाई मन पर्छ। तिमिसंग म संगै जीवन कटाउन चाहान्छु। के तिमिले मेरो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्छौ?"
अब के होला ? के स्विकार्छिन होला त हिमालको प्रेम प्रस्ताव सुस्मिताले?
अनुमान गर्दै गर्नुहोला है....
(भाग-३, यहि असार २० गते अर्थात आइतबार साँझ प्रकाशित गर्नेछु। पाठक सम्पुर्णमा धेरै आभारी छु साथमा न्यानो माया)